Guddoomiye Cusmaan Barre oo ku dhawaaqay qorsho ku saabsan doorashooyinka Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Guddoomiye Cusmaan Barre oo ku dhawaaqay qorsho ku saabsan doorashooyinka Hir-Shabeelle
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle Cusmaan Barre Maxamed oo maalmahaan ku sugnaa muqdisho ayaa dib ugu laabtay Magaalada Jowhar.
Soo dhaweyn, kaddib Guddoomiye Cusmaan Barre ayaa Jowhar kaga dhawaaqay qorsho lagu dardar gelinayo doorashooyinka Hir-Shabeelle.
Hoos ka Akhriso qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook
Waxaan maanta dib ugu soo laabanay Caasimadda Dowlad Goboleedka Hirsbabelle ee Jowhar, kaddib Safaro shaqo oo aan maalmo ku joognay magaalada muqdisho ee Caasimada Dalka.
Safarka oo ay igu wehliyeen, Gudoomiyaha Gobalka Sh. Dhexe, labada Gole ee Dowladda, Saraakiil iyo wax garad ayaan maanta kusoo gaarnay Caasimadda Hirshabelle iyadoo Hirshabelle udiyaar garoobeyso Doorasho.
Intii aan joognay caasimadda Muqdisho waxaan kulamo la qaadanay madaxda Dalka ugu sareeyso, Hay’adaha Caawiyo Hirshabelle iyo dhammaan dadka daneeyo Hirshabelle anagoo kawada hadalnay Horumarinta iyo dhismaha Hirshabelle.
Ugu dambeyn maalmaha soo socoda waxaan dar dar gilin doonaa Dhismaha Hirshabelle Cusub oo loo dhanyahay maadama mudo xileedka Hay’adaha Dastuuriga uu idlaaday.
Previous articleMacalin Maxamuud oo ku gacan seeray kulan uu ka dalbaday Kheyre.
Next articleQoyska Marxuum Cali Khaliif oo dalbaday in baaritaan lagu sameeyay waxa sababay geerida